Post by Maamul , Jan 25, 2018.
Hargeysa – (TELESOM) – Shirkadda Isgaadhsiinta casriga ah ee Telesom ayaa 15 August 2017 magaaladda Hargeysa markii ugu horeysay ku daah-furtay adeega cusub Telesom Cloud. Adeegan oo ah kii ugu horeeyey ee dalka laga hirgaliyo, shirkadda ayaa sidoo kale 10 computer iyo adeega Cloud ugu deeqday 10 ka mid ah iskuuladda dawladda si ay ugula tartamaan kuwa gaarka loo leeyahay dhinaca tiknoolajiyadda.
Xafladda Daah-furka adeegan oo ka dhacday huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxaa ka soo qayb-galay Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Wasiirka Tiknoolajiyadda, Cilmi baadhista iyo Xidhiidhka Golayaasha, Agaasimaha komishan ICT-ga , marti-sharaf kala duwan oo ka socday shirkadda waaweyn ee dalka, Jaamacadaha dalka, hay’addaha caalamiga ah, hay’addaha maxaliga ah, masuuliyiin ka socday warshadaha dalka ka jira, shirkadaha IT-ga iyo marti-sharaf kale oo badan.
Ugu horeyn Ujeedaha daah-furka adeegan waxaa si kooban u sharaxay agaasimaha horumarinta bulshadda ee shirkadda Telesom Muddane Cabdiwahaab Maax, waxaanu sheegay in shirkadda Telesom ay maanta dalka ka hirgalisay adeegii ugu horeeyey ee Cloud Services oo maxali ah.
“Waxaa farxad noo ah in aad nagla soo qayb-gashaan xafladan aanu ku daah-furayno adeegga cusub ee loo yaqaano Cloud Computing (Keydka Daruuraha) ama Telesom Cloud Services. Sidaad hore uga barateen in Telesom markasta ay ahayd Telesom 1st, shirkaddii ugu horeysay ee waddanka keentay Internet, shirkaddii ugu horeysay ee waddanka keentay moobayl, shirkaddii ugu horeysay ee waddanka keentay mobile money ZAAD iyo waxyaalo badan. Maanta waxaynu u joognaa inaynu daah-furno adeegan cusub ee Telesom Cloud Services”, sidaasi waxaa yidhi Agaasime Cabdiwahaab Maax.
Maxamuud Cabdiraxmaan Gadhyare Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga iyo Xidhiidhka Caalamiga ah ee Shirkadda Telesom ayaa ka hadlay doorka uu adeega Cloud Servies uu leeyahay horumarinta ganacsiga iyo hay’addaha kala duwan ka hawl-gala dalka. Sidoo kale waxaa uu sharaxay faa’iidooyinka tiknoolajiyadeed ee uu adeegani ku soo kordhiyey dunidan casriga ah.
Injineer Cali Daahir Agaasimaha hay’adda ICT-ga ayaa shirkadda Telesom ku hambalyeeyey adeegan casriga ah ee ay dalka ka hirgalisay, waxaanu sheegay in adeegan uu dalka horumar balaadhan ku soo kordhin doono, gaar ahaan uu hay’addaha dawladda uu u keeni doono horumar weyn.
Wasiirka Tiknoolajiyadda, Cilmi baadhista iyo Xidhiidhka Golayaasha Somaliland Muddane Axmed Xaaji Daahir ayaa ka hadlay geedi socodka tiknoolajiyadda dalka waxaanu sheegay in aanay maanta jirin tiknoolajiyad inaga maqan oo dalka ka jirta. Wasiirka ayaa sheegay Somaliland oo ah dal yar oo aan la ictiraafin oo haddana ka horumarsan dalal badna oo dunida ah.
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Muddane Mustafe Faarax Abraar ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in shirkadda Telesom ay soo kordhisay adeegan cusub ee Cloud Services, waxaanu sheegay in adeegan uu wax weyn ka tarayo shaqooyin ay hadda wasaaraddu waddo oo ay doonayso in ay isku xidho dhawr wasaaradood oo u baahan inay ka faa’iidaystaan adeegan.
Eng. Cali Boosir Maamulaha Waaxda Horumarinta Ganacsiga ee Shirkadda Telesom ayaa si qoto dheer u sharaxay adeega Cloud iyo waxa uu dheer yahay cloud dunidda ka jira. Injineerka ayaa sheegay in adeega Cloud uu qof isticmaali karo isagoon internet-ku u shaqaynayn, waxaanu tusaale u soo qaatay shirkadda DP World oo isticmaashan adeegan Cloud ee shirkadda oo uu internet-ku dalka ka go’naa muddo saacad ku dhow, balse shirkadda aanu adeegeedu mar kaliya go’in. Waxaanay tusaale cad u noqotay sida uu adeega Telesom u yahay mid aamina ah oo la isku halayn karo.
Injineer Cali Boosir ayaa sidoo kale sheegay in adeegan iskaashi ganacsi la samaynaayo shirkadda ka ganacsadda samaynta website, waxaanu sheegay inuu kordhin doono macmiishood in ka badan inta ay bishii u adeegaan.